Multi-Line Lubrication Pump | Paompy fanosorana menaka maro andalana
Home/Paompy elektrika famenosana herinaratra/DDB-XP Grease Multi Point Lubrication Pump, Tosidra ambony hatramin'ny 31.5Mpa, Mihoatra ny 15 Lube Points
Product: Paompy fanosorana menaka DDB-XP
3. Ny injector tsirairay dia manana ny mari-pamantarana fanerena ho an'ny maso
DDB-XP Multi-Line lubrication paompy dia avo-tsindry herinaratra lubrication paompy izay mety ho ambany lubricating matetika ho an'ny fantsona dia zaraina amin'ny rafitra lubrication ao anatin'ny 50 metatra. DDB-XP Multi-line lubrication paompy azo ampiasaina amin'ny point-to-teboka mitovy habe amin'ny menaka na mivantana famatsiana lubrication rafitra. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fizarana tokana amin'ny rafitra famatsian-tsolika isan-karazany.
DDB-XP Multi-Line lubrication paompy dia fanerena avo vaovao rafitra famatsiana mivantana natao ho an'ny tsy fahampian'ny tsindry ny menaka na menaka mivantana famatsiana rafitra lubrication. Nitombo ho 31.5 MPa ny fanerena avo indrindra, izay nanonitra tsara kokoa ny toetr'andro ririnina amin'ny tsena avaratra izay matetika miatrika olana amin'ny fikorontanan'ny menaka na menaka amin'ny rafitra fanosotra. Ny andian-dahatsoratra DDB-XP dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny metallurgy, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fitaovana fanorenana, fingotra, forging, seramika ary indostria hafa amin'ny fampisehoana tsara sy ny vidiny ambany.
DDB-XP Multi-Line lubrication paompy dia vacuum suction karazana piston paompy, izay mandeha amin'ny alalan'ny kankana sy ny kodiaran'ny kankana ao amin'ny maotera-mifandray paompy vatana, ary manosika tanany eo amin'ny afovoany shaft. Aorian'ny hetsika radial parallèle, ny piston lehibe dia ampiasaina mba hamenoana menaka na famatsiana menaka, ary mihetsika miaraka ny andry afovoany, ny takelaka fanerena solika dia atosiky ny menaka, mihodinkodina miaraka amin'ny menaka, ny menaka na menaka, ary ny menaka na menaka dia manindry hatrany amin'ny ambonin'ny sivana ary atsofoka amin'ny vatan'ny tsanganana lehibe. Isaky ny fihodinan'ny famafazana menaka, ny injector/nozzle tsirairay dia mamahana na ny menaka indray mandeha.
Operation ny DDB-XP Multi-Line Lubrication Pump
Hamarino fa ara-dalàna ny fifandraisana amin'ny tsipika, ary avereno ny herinaratra (famatsiana herinaratra AC 380V), dia sokafy ny fonon'ny tanky ary diniho raha mitovy amin'ny tari-dalana asehon'ny zana-tsipìka voamarika eo amin'ny tanky ny fitarihana ny fihodinan'ny wiper. . Raha tsy izany, dia hanimba ny sivana sy ny singa hafa, ary hiteraka tsy fahombiazana ny famatsiana menaka na menaka.
Rehefa mifidy menaka sahaza, rehefa 20°C na ambony ny maripana ivelany, dia asaina mampiasa menaka misy tsindrona 265 na mihoatra. Raha 20°C na ambany ny hafanana ivelany, dia asaina mampiasa fanjaitra 300 na mihoatra (Na ny menaka no ampiasaina, ny fomba fanaraha-maso tsotra tsotra: Rehefa miasa ny paompy, dia afaka mihodina miaraka amin'ny fusion aorian'ny fihodin'ny menaka fanosorana menaka.Izany no mety tsara, raha tsy izany dia mila soloina ny menaka).
Sokafy ny sarony mba hamenoana ny menaka (raha mafy na simba ny menaka ao amin'ny paompy) ary fenoy izany amin'ny compaction, mitandrema mba tsy hampifangaro ny loto, ny bubbles, sns.
Atombohy ny famatsiana herinaratra ary diniho fa miasa ara-dalàna ny tsindrona menaka / nozzle rehetra.
Fanamarihana: Alohan'ny fiasan'ny DDB-XP Multi-Line Lubrication Pump:
Tokony hapetraka eo afovoan'ny toerana fanosorana lavidavitra indrindra ny paompy fanasan-damba maromaro DDB-XP.
Ny menaka na menaka ao anaty fitoeran-drano dia tokony ho madio. Amin'ny 20 ° C na ambony, mifidiana menaka 2 na mihoatra. Rehefa latsaka ambanin'ny 20°C ny maripana ivelany, dia fidio ny menaka mihoatra ny 0°C. Ny menaka fanosotra dia tsy maintsy manana viscosity lehibe kokoa noho ny N68.
Ny haavon'ny menaka ao anaty barika dia tsy tokony ho ambany noho ny tampon'ny shaft mba hisorohana ny fivoahana. Tsy hiteraka menaka ny rivotra miditra.
Isaky ny 300 ora fiasana, dia ovay indray mandeha ny menaka ao amin'ny efi-tranon'ny kankana.
Kaody famandrihana amin'ny DDB-XP Multi Line Grease Lubrication Pump
(3) Series = XP Series (DDB-X miaraka amin'ny mari-pamantarana fanerena ho an'ny tsindrona tsirairay ho hita maso)
Ny angon-drakitra ara-teknika momba ny DDB-XP Multi-Line Grease Lubrication Pump
[email voaaro]2021-11-17T21: 58: 17 + 00: 00